စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့် WordPress ဆိုက်တွင် PDF Reader ကို ထည့်သွင်းနည်း Martech Zone
ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူ တိုးတက်နေသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုသည် ၎င်းတို့ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အလားအလာကို မှတ်ပုံတင်ရန် အလားအလာကို အတင်းအကြပ်မခိုင်းဘဲ ၎င်းတို့၏ဆိုက်များတွင် အရင်းအမြစ်များကို တင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် PDF များ - စာရွက်ဖြူများ၊ အရောင်းစာရွက်များ၊ ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုများ၊ အသုံးပြုမှုကိစ္စများ၊ လမ်းညွှန်များစသည်ဖြင့်။ ဥပမာအနေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အလားအလာများသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော ပက်ကေ့ချ်ကမ်းလှမ်းမှုများကို ဖြန့်ဝေရန်အတွက် ၎င်းတို့အား အရောင်းစာရွက်များပေးပို့ရန် တောင်းဆိုလေ့ရှိပါသည်။ မကြာသေးမီက ဥပမာတစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Salesforce CRM ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ ဝန်ဆောင်မှု။
အချို့သောဆိုက်များသည် PDF ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကလစ်နှိပ်နိုင်သည့် ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်များမှတစ်ဆင့် PDF များကို ပေးဆောင်သည်။ ဒီအတွက် အားနည်းချက် အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
PDF ဆော့ဝဲ - PDF တစ်ခုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ဖွင့်ရန်အတွက်၊ သင့်အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်း သို့မဟုတ် ဒက်စ်တော့ပေါ်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပက်ကေ့ချ်ကို ထည့်သွင်းပြီး ပုံစံသတ်မှတ်ထားရပါမည်။
PDF ဗားရှင်းများ - ကုမ္ပဏီများမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော PDF များတွင် ဗားရှင်းများနှင့် အပ်ဒိတ်များ မကြာခဏ ရှိသည်။ သင့်ဖောက်သည်များသည် လင့်ခ်ကို အဟောင်း PDF တွင် သိမ်းဆည်းပါက၊ ၎င်းတို့တွင် ခေတ်မမီသော ထုတ်ဝေမှုတစ်ခု ရှိနေနိုင်သည်။
analytics - PDF သည် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုသူအပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဒေတာကို ဖမ်းယူရန် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် မည်သည့်ဝဘ်စာမျက်နှာမှ မရှိပါ။
အဖြေမှာ သင်၏ PDF ကို ဝဘ်စာမျက်နှာတွင် ထည့်သွင်းပြီး ၎င်းအစား ထိုလင့်ခ်ကို ဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် PDF ကို ဝဘ်စာမျက်နှာအတွင်းရှိ PDF reader တွင် မြှုပ်နှံပါက၊ လည်ပတ်သူသည် PDF ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီး PDF ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ် (ဖွင့်ထားလျှင်) နှင့် Google Analytics အတွင်းရှိ အခြားစာမျက်နှာများကဲ့သို့ စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှုများကို ခြေရာခံနိုင်ပါသည်။
WordPress PDF ပလပ်အင်
သင် install လုပ်ပါလျှင် PDF Embed Plugin WordPress အတွက်၊ သင်သည် ဤအရာအားလုံးကို အလွယ်တကူ ပြီးမြောက်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ ငါတို့မှာ ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း. PDF Embedder ပလပ်အင်သည် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် တိုတောင်းသောကုဒ်နှစ်ခုလုံးကို ပေးဆောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် မူရင်း WordPress တည်းဖြတ်မှုအတွက် ၎င်းတို့၏ Gutenberg ဒြပ်စင်ကို သင်သုံးနိုင်သည်။
ဤသည်မှာ စာမျက်နှာပေါ်ရှိ ရလဒ်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပေသည်။
ထုတ်ဖော်: ငါကတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်၏ PDF ပလပ်အင်များ (ဖောက်သည်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။)
Tags: Adobeဒေါင်းလုပ် pdfpdf ကိုထည့်ပါ။ဘယ်လိုpdf ထည့်သွင်းပါpdfPDF Embedpdf မြှုပ်နှံမှုpdf ပလပ်အင်pdf wordpress ပလပ်အင်WordPresswordpress plugin ကိုwp pdf
@dknewmedia PDF တစ်ခုထည့်သွင်းနည်းအတွက် သင့်ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လိုက်နာရလွယ်ကူပြီး ကျက်သရေရှိစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကာ ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရာတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Bravo! ကောင်းသော ပို့စ်များကို ဆက်လက်ရေးသားပါ။